३३ किलो सुन प्रकरणमा यसरी ठुला माछाहरू नै छाडिएपछि फेरि पोखरी धुमिल्याउँदैनन् त सरकार? – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > ३३ किलो सुन प्रकरणमा यसरी ठुला माछाहरू नै छाडिएपछि फेरि पोखरी धुमिल्याउँदैनन् त सरकार?
admin September 28, 2018 Uncategorized	0
विराटनगर – साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले पूर्व डिआइजी गोविन्द प्रसाद निरौलालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। विहीवार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै निरौलालाई साधारण तारेखमा छाेड्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतको आदेश रितपूर्वक नदेखिदा केसीलाई साधरण तारेखमा राखि मुद्दाको कारवाही अगाडी बढाउन आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी राजकुमार दाहालले जानकारी दिए। मुलुकी ऐन अदालती बन्दाेवस्तीको ४७ नम्बर बमोजिम साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिइएको उनले बताए। निरौलाले जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सादा तारेखमा छाड्न माग राख्दै असार ७ गते निवेदन दिएका थिए। यसअघि उच्च अदालतले प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू एसएसपी दिवेश लोहनी,
एसएसपी विकासराज खनाल, डिसएपी प्रजित केसीलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिइसकेको छ। यस्तै डिएसपी सन्जय राउत , तुलाराम थारु र लाक्पा शेर्पा, टेकराज मल्ल, राजनकुमार, महाबिर गोल्यान, सम्बिरप्रसाद तोलांगे, लुलाराम थारु, पुण्यप्रसाद लामा, हेमन्त गौतम, राजन थापाका सम्बन्धमा जिल्लाकै आदेश सदर गरी थुनामै राख्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ।
प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खड्का र प्रहरी हवल्दार अम्मरबहादुर थापालाई भने जिल्लाको आदेश रितपूर्वक नदेखिएको भन्दै थुनामा राख्न उच्च अदालले आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले विष्णुबहादुर खड्कालाई धरौटी र अम्बरबहादुर थापालाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो।
OMG! फेरि भोजपुरमा ५ बर्षिया बालिका माथि सामुहिक बलात्कार…
फेरि मोरङमा घट्यो अर्काे दुःखद घटनाः जङ्गल भित्र भेटियो एक पुरूषकाे शव!